ကြာဇံ စား ကြ မယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြာဇံ စား ကြ မယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ကြာဇံ စား ကြ မယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Sep 29, 2014 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 59 comments
ထမင်းဆိုင် ပြန်ဖွင့်မို့ သာ ကြိုးစားပြီး စု ရတာ။ ဘာဟင်းမှ လက်ထဲမရှိဘူးးး
တဂျီးကလည်း လူလည် (အဟွတ်! သူမလာခင် အတင်းအုပ်လိုက်ဦးမယ်)
ဖြစ်နိုင်ရင် အချိုးအစား ရော လိုချင်တာ…
ကိုယ့်မလည်း စားဖိုမှူးတွေကို ဒီထက် ချေးများလို့ တွန်းလို့ က မကောင်းးးဘူး လေ.။
အဲဒီတော့လည်း ဂလိုပဲ ကြံရဖန်ရတော့မယ်။
ဒီ တစ်ပတ်တော့ ကြာဇံ စား ရအောင်။
လူတိုင်း စားလို့ ရအောင် ကြက်သားနဲ့ပဲ အားပြု ပေးထားပါတယ်။
(ကြာဆံလို့ ပေါင်းရမယ်ထင်တယ်၊ မသိဘူးး အားရသလို ပေါင်းလိုက်ပြီ)
ပဲကြာဇံ ကြိုက်သူက ပဲကြာဇံ ချက်နည်းယူပေါ့။
ဆန်ကြာဇံ ကြိုက်သူက ဆန်ကြာဇံ ချက်နည်း ယူပေါ့။
အချိုးအစားလည်း ကြိုးစားပြီး ပေးထားတယ်။ ကွကိုယ် လိုတိုးပိုလျှော့သာ လုပ်ပါတော့နော့။ :mrgreenn:
၁) ကြက် ကြာဇံ ပေါင်း (မွသဲ ဆီက)
၂) ကြက် ကြာဇံ ကြော် (မွအိ ဆီက ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ)
၃) ကြက် ကြာဇံ ပြုတ် (ကေဇီ ရဲ့ လောက်ဇီး ကွတ်)
၄) ကြက် ကြာဇံ ဆီချက် (ကေဇီ ရဲ့ လောက်ဇီး ကွတ်)၊
၅) ကြက် ကြာဇံ သုပ် – ဗမာ သုပ် (ကေဇီ ရဲ့ လောက်ဇီး ကွတ်)၊
၆) ကြက် ကြာဇံ သုပ် – ယိုးဒယားသုပ် (ကေဇီ ရဲ့ လောက်ဇီး ကွတ်)၊
၂A) ကြက် ကြာဇံ ကြော် (မွအိ ဆီက ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ)
– ဆန်ကြာဇံ ၁ ထုတ်
– ကြက်သား တောက်တောက်စဉ်း ၁၅ ကျပ်သား၊
–ကြက်အူချောင်း ၁ ချောင်း အမျှင်လှီး ထားပါ၊
– ကြက်သွန်ဖြူ နှစ်မွှာလောက် ဓားပြားရိုက်ထား
– တရုတ်နံနံ အနဲငယ်လှီးထား
– မုန်လာဥနီ ၊ ဘိုစားပဲ ၊ ပန်းပွင့် ၊ဂေါ်ဖီ စသည်ဖြင့် နှစ်သက်ရာ အသီးရွက်များကိုအနေတော် ပါးပါးလှီး လိုက်ပါမယ်။
– ပဲပြား တစ်တုံး အတုံးသေးများတုံးထားပါ
-ကြက်ဥ တစ်လုံး ခလောက်ထားပါ။
– ပဲငံပြာရည်အနောက် စားပွဲတင်ဇွန်း 1ဇွန်း
–ခရုဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း 1ဇွန်း
– ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် အနဲငယ်
– ကြာဇံကို အနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက် ရေစိမ်ထားပါ။၊
– အသားကို ဆား၊ကြက်သားမှုန့် ရောနယ်ထားပါ။
– ဆီပူလာရင် ပဲပြားတုံးလေးတွေ ကြော်ပြီးဆယ်ထားပါ၊
– ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူ လေးဆီသတ်လို့ အသား၊ ကြက်အူချောင်း ထည့်ပါမယ် ခဏ နေရင် အသီးရွက်လှီးထားတာတွေထည့်ကြော်ပါမယ်။
– အသီးရွက် အသား များအနေတော်ဖြစ်ရင် ခုဏဆယ်ထားတဲ့ ပဲပြားလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်၊၊
-ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် ၊ပဲငံပြာရည် အနောက်ရည် ၊ခရုဆီ ထည့်ပါမယ်..နောက်
–တရုတ်နံနံ ရယ် ငရုတ်ကောင်းလေးနဲနဲရယ် ထည့်လိုက်ပါ..ရေအနည်းငယ် ထည့်ပါမယ်…
– ပြီးမှ အိုးထဲကို ကြာဇံထည့်ပြီး နှံ့အောင် မွှေပါ။ ခဏ ဖုံးထားပါ၊၊
–ခဏနေ မွှေကြည့်လို့ ရေမကျန်တော့ရင် မီးပိတ်လိုက်ပါ… အရသာရှိတဲ့ ကြာဇံကြော်ရပါပြီ။
– ကြက်ဥ အချပ်ကြော်လေး ကြော်ပြီး ညှပ်ထည့် စားသောက်နိုင်ပါတယ်။
– အချဉ် အတွက်တော့ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး ရေဆေး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးပါးပါးလှီးထည့်
သံပုရာရည် ဒါမှမဟုတ် နှစ်သက်ရာဆော့ တစ်မျိုးမျိုး ဆမ်းလို့ တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်…
ကြက်သားနေရာကို ဂဏန်း အစားထိုးလို့လည်း ရ၏။
၂B) ယိုးဒယား ပဲကြာဇံကြော် (ဆိုင် က မေးထားသည်)
(ယိုးဒယားက ပဲကြာဇံကို သုံးတာများတယ်)
-ကြက်သား တောက်တောက်စဉ်း ၅၀၀ ဂရမ်၊ ကြက်မြစ်ကြက်သဲ ၃ တွဲ
– ကိုက်လန် အနူလေးတွေကို အရွက်သင်ထားတာ တစ်စည်း
ကြာဇံကို ရေစိမ်ပြီး ကိုယ် ကြိုက်ရာ အနေအထားလောက်ညှပ်ပြီး ရေ စစ်ထားပါ။၊
ပြီးရင် ပဲငံပြာရည် အကြည်/အနောက်/ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် စတာတွေနဲ့ နယ်ထားပါ။
အသားကို ပဲငံပြာရည် အကြည် ရောနယ်ထားပါ။
ဆီအိုးထဲ ကြက်သွန်နီထည့်ပြီး ကြော်ပါ့မယ်၊
ပြီးရင် အသားလေးတွေ နဲ့ ကြက်မြစ်ကြက်သဲတွေကိုကြော်လိုက်ပါ
အသားကျက်ပြီဆိုရင် ခဏ ဆယ်ထားပါ။
ပြီးရင် မုန်လာဥနီနှစ်လုံး၊ ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလှီးထားတာတို့ကိုပါရောကြော်ပါမယ်
ပဲပင်ပေါက်ကိုလဲ ပြီးမှ ထည့်ပါမယ်။ ပဲပင်ပေါက်နွမ်းမသွားခင် ဆယ်ထားလိုက်ပါဦးး
ပြီးမှ အိုးထဲကို ကြာဇံထည့်ပြီး ကြော်ပါမယ်။ ကြာဇံက ကို မပြတ်သွားအောင် မွှေရင်း ကိုယ် စိတ်ကြိုက် အပျော့အမာ အနေအထားမှာ ခုနက အသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေကိုထည့်ပြီး
ယောက်မ ၂ လက်နဲ့ ဖွမွှေပြီး ကြော်ပါ။ မီးပိတ်ခါနီးမှ ကြက်သွန်မြိတ်လေးဖြူး ၊ ငရုတ်ကောင်းလေးနဲနဲဖြူးပြီးရင် အရသာရှိတဲ့ ကြာဇံကြော်ရပါပြီ။
(အဲ!! ပုံက တော့ စီးဖု နဲ့ ကြော်ထားတာ)
ယိုးဒယား စီးဖု ပဲကြာဇံကြော်
အမယ် စုံ အောင် မပါပါအောင်ထည့်တာမို့ သည်းခံကြပါ ပလိတ်သတ်ကြီးး
အမှန်က ကြေးအိုးနဲ့လည်း ဆင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြေးအိုး အဆင့်ထိ လုပ်နိုင်ဖို့ မတတ်နိုင်တဲ့ အပျင်းမမို့ ဆောင်းတွင်းညပိုင်းမှာ မောင်လေးတွေကို တစ်ပတ်ရိုက်ပြီး ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်ပါ။။
ဆန်ကြာဇံ – လူရှိသလောက်ကြည့်ထည့်ပေါ့။ ခိခိ (ကျနော်က တစ်ယောက်စာ အထုပ်လေးတွေနဲ့ပဲ ချိန်တယ်)
ကြက် – တစ်ကောင် (အရိုးအသားခွဲ)
မုံညင်းစိမ်း – တစ်ပန်းကန်ကို ၂ ပင်နှုံးနဲ့ တွက်ပြီး ရေဆေးထားပါ။
ပိန်းဥ – ၂ ဥ
ငရုတ်သီးစိမ်း – တပန်းကန် ၃ တောင့်နှုံးနဲ့ ဖင်ခွဲထားတယ် (ငရုတ်သီးစိမ်းကို ပြောတာ)၊
ငရုတ်ဆော့ – တစ်ပုလင်း
– ကြာဇံတွေကို ထုံးစံ အတိုင်း ရေစိမ်ထားပါ။
– ကြက်ရိုးတွေကို ပိန်းဥ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဒါးပြားရိုက်နဲ့ တစ်နေ့လုံး မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ ပြုတ်ထားပါ။
– ကြက်သား အသားလေးတွေ မျှင်ပြီး အကျွတ်ကြော်ထားပါ။
– ငရုတ်ဆော့ ထဲကို ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးပြီး သံပုရာသီးပါ ညှစ်ထားပါ။
– စားခါနီးပြီ ဆိုမှ အိုး အငယ်ထဲကို မုန့်ညှင်းထည့် ကြက်ရိုးပြုတ်ရည် တပန်းကန်စာထည့်ပြီး တည်၊
– ပွက်ပွက်ဆူမှ ကြာဇံ တစ်ယောက်စာ ညှပ်ထည့်၊ ဆူပြီ ဆိုရင် ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်ထည့်ပြီး အပေါ့အငံချိန်
– ပန်းကန်လုံးထဲကို ကြက်သားအမျှင်ကြော်ပါ ဖြူးပြီး ပေးလိုက်ပါ။
ကြက်ပေါင်း ကြာဇံ ဆီချက် စားမားး??? :mrgreenn:
ဘာတွေ ပါရမတုန်း ဆိုရင်
ကြက် အရွယ်ငယ်ငယ် တစ်ကောင်လုံး ကို ဝယ်၊ အရေခွံပါ ပါပေ့စေနော်။
ကလီစာတွေနှုတ်၊ ဆားနဲ့ နယ်ထားး
ရိုက် ကွတ်ကာထဲမှာ နှုတ်သီး၊ အတက် ဖြတ် ရေဆေးပြီး အကောင်လိုက်ထည့်
ကြက်သွန်ဥ – ၃ လုံး အလုံးလိုက်ထည့်
ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ မွှာလောက် ရောထည့်
ဂျင်း – လက်တစ်ဆစ်လောက် ပစ်ထည့်
ပဲငံပြာရည် အနောက် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် အကြည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
နာနတ်ပွင့် ၅ ပွင့်လောက် ထည့်
သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဝက်လောက် ထည့်
ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၅ ဇွန်းလောက်ပဲထည့် ပြီး ခလုပ်နှိပ်ထားလိုက်တော့။
ခလုပ်တက်ရင် ကျက်ပြီပေါ့။ အရေခွံက ဆီရယ် ကြက်သားက အရည်လေးတွေရယ် မခန်းခင် အနေအထားက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ပြီးရင် ကြက်ပေါင်း ဆီလေးကို ပန်းကန်လုံးလေးထဲ စစ်ထားလိုက်။
ဆီအိုး တည်။ ဆီကျက်ရင် ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတွေကို ထည့်ပြီး မီးပိတ်ထားလိုက်။
ကြာဇံ ပြင်ကြစို့။ ကြာဇံကို ကိုယ်ကြိုက်ရာ အနေအထားထိပြုတ်။ ဆီချက် အတွက်ဆို မာမာလေးက ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
ပန်းကန်ထဲကို ကြာဇံ တစ်ယောက်စာ ပြင်
ကြက်ပေါင်းဆီလေး – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းစာထည့်
ဆီချက် – တစ်ဇွန်းထည့်
ပဲငံပြာရည် အကြည် – တစ်ဇွန်း ထည့်
ပြီးရင် နယ်ပြီးမှ အပေါ်က ကြက်သားအမျှင်လေးတွေဖြူးပြီး ကြက်သွန်ဖြူကြော်လေး ဖြန်းပြီး အချဉ်နဲ့ တို့ စားတော့။ :mrgreenn:
ဗမာ ကြာဇံသုပ် အလွယ်လေးနော့။ လူတိုင်းသုပ်တတ်မှာပဲ။
တစ်ချို့က ဆန် ကြာဇံကို သုပ်တယ်။
ကျနော်က တော့ ပဲ ကြာဇံကို သုပ်တာကိုပဲ ကြိုက်လို့။
အချိုးတွေကို မြင်ရင် မဆူရဘူးနော်။ ဟိဟိ :mrgreenn:
ပါးပါးလှီးထားတဲ့ အာလူးပြုတ် – ၃ လုံး
ပါးပါးလှီးထားသောဂေါ်ဖီ – လက်တစ်ဆုပ်
ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်နီ – လက်တစ်ဆုပ်
ရေစိမ်ပြီးတစ်မိနစ်လောက်ပြုပ်ထားသော ပဲကြာဇံ – ဟင်းစားပန်းကန် တစ်ပန်းကန်စာ
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်၊
မြေပဲမှုန့် – လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း ရဲ့ တစ်ဝက်
ငံပြာရည် – ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ဆီချက် – ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
မန်ကျည်းမှည့်ရည် – ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
ဇလုံထဲသာ အကုန်ထည့်နယ်ပြီး အပေါ်က ကြက်သွန်ဖြူကြော်လေးဖြူး စားလို့ ရပြီ
အချိုးမပါရင် ပြောမဆိုးလို့။ :mrgreenn:
ဟိ။ လိုတိုးပိုလျှော့ ကွကိုယ်လုပ်ကြနော်။
ပဲပုပ် မှုန့်တို့ ပဲမှုန့်တို့ ကြိုက်လည်း ထည့်သုပ်လို့ရတယ်။
ကြက်ပေါင်တွေကို ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းပြီး အရည်ညှစ်ထားတာနဲ့ နယ်။
ပြီးရင် ဆီပူထဲထည့်ကျော်ပြီး အိုးချခါနီးမှ ဂျင်းနဲ့ သွန်ဖြူ အရည်ညှစ်ထားတာလေး ပစ်ထည့်ပြီး မတူးခင် ချပြီး
စားနေကျ ယိုးဒယားဆိုင်က ပဲ ကြာဇံသုတ် က နည်း မေးတော့ လွယ်လို့… :mrgreenn:
ပဲကြာဇံ – တစ်ထုပ်
ကောက်ရိုးမှို – ၅ လုံး
ကြက်သွန်ဥ ဖြူ – ၅ မွှာ
ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့် – ၄ တောင့်မှ ၇ တောင့် (ကိုယ် အစပ်စားနိုင်သလောက် မူတည်ပြီး)
ကြက်သား ရင်အုပ် – တစ်ပိုင်း (အရိုးအသားခွဲထား)
– ကြက်သား ကို စပါးလင်လေးနဲ့ ပြုတ်ပြီး ဆယ်ထား၊ အရိုးနဲ့ အသားခွဲ။
– အသားကို မျှင်ပြီး သပ်သပ်ဖယ်ထားး
– အဲဒီပြုတ်ရည်ထဲကို မှို ရယ် ကြက်သွန်ဖြူရယ် ငရုတ်သီးစိမ်းရယ် ကို ဆက်ပြုတ် ၊ ရရင် ဆယ်ပြီး သပ်သပ်ထားး
– ငရုတ်သီးစိမ်းကို ထောင်းပြီး အနှစ်ကို သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး စိမ်ထားး၊ အပေါ့အငန်မြည်းထားပါ။ ကြိုက်တတ်ရင် သကြားနည်းနည်းထည့်လို့ရပါတယ်။
– အဲဒီ အိုးထဲမှာပဲကြာဇံပြုတ်ထားတုန်းအချိန်မှာ
– ပန်းကန်ဇောက် နက်နက်ထဲကို ကြက်သား၊ မှို၊ ကြက်သွန်ဖြူ ကို ပြင်ထားး
– ကြာဇံ အနေတော် ရတာနဲ့ တန်းဆယ်ပြီး အရည်စပ်စပ်နဲ့ကို ပဲ ခုနကပြင်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲ တန်းထည့်ပြီး ဖြော်ထားတဲ့ ချဉ်စပ်ရည်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
– ပြီးမှ မွှေပြီး ပူတုန်း စားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
– ကြိုက်တတ်ရင် ပြည်ကြီးငါးပြုတ်တို့ ပုဇွန်ပြုတ်ပါ ထည့်လို့ရပါတယ် ခင်ညာ။
ဒါမဲ့ ဘယ် လင့် က ယူမိမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူးးး။ ညွှန်းထားတာ လိုတိုရှင်းမို့ ကိုယ့် အကြိုက်နဲ့ ညီလို့ ယူထားတာ။
၄.ငုံးဥ. ပြုတ်ထားပါ.ဘဲဥ ကိုပြုတ်ပြီးပါးပါးလှီးထားပါ.
၅.ပဲကြာဇံ (ယိုးဒယား ထုပ်သုံးထားပါတယ်)
၆.ကြက်သွန်ဖြူ နီဂျင်း (ထောင်းထားပါ)
၇.ဆား ငံပြာ၇ည် အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့် .င၇ုတ်ကောင်းမှုန့်
ချက်မည့်အိုးထဲကိုကြက်သားဆားအချိုမှုန့်ဆနွင်း င၇ုတ်နှစ် ကြက်သွန်ဖြူ နီဂျင်းငံပြာ၇ည်ထည့်ပြီးလုံးပါ.
ငုံးဥ.ကြက်သွန်နီ ဥ ဘဲဥထည့်ပါ.
ကြာဇံကို ခေါက်ဆွဲထက် ပိုကြိုက်တယ်…
ကြာဇံ နဲ့ ခေါက်ဆွဲ ဆို ကြာဇံကိုပဲ ရွေးမယ်
ပထမဆုံး နေရာဦးသွားပါသည် …
loading လုပ်နေတုန်း ပထမနေရာ ဦးသွားတဲ့သူရှိသွားတယ် …
ပထမဆုံး မွသဲရဲ့ ကြာဇံပေါင်းတင်တုန်းက ငြင်းခုန်ဖြစ်ခဲ့တာလေး သတိရသွားတယ် ..
ပဲကြာဇံနဲ့ ဆန်ကြာဇံ ငြင်းခဲ့ကြတာ …
ကြာဇံက သိပ်မအီလို့ ကြိုက်တယ် …
အမှန်ကလေ ဆန်ကြာဇံက မုန့်ဖတ် အသေးနဲ့ တူလို့ ပဲ ကြာဇံကိုမှ ကြာဇံထင်တယ်။
ကြက် ကြာဇံ တဲ့
တခြား အသားနဲ့ လုပ်ပေးဘာာာ :mrgreenn:
ကြက် ကို စိတ်နာနေတဲ့ သဘောပဲ။
မိုက်စ် မိုက်စ် မိုက်စ် :mrgreenn:
ပဲကြာဇံ ဆီးဖုနဲ့ ကြိုက်စ်
ဒီ လာရင် သွားစားကြမယ်။
ခေါက်ဆွဲမှာက ဆိုဒါပါလို့ သွေးနဲနဲတက်တတ်တဲ့ အတွက်
ဆန်ကြာဇံ၊ ပဲကြာဇံ နှစ်မျိုးစလုံး ကြိုက်တယ် မျိုးစုံလုပ်စားတယ်…
မွအိ ရဲ့ ကြာဇံကြော် နဲ့ ဓာတ်ပုံအတွက်လည်း ကျေးကျေးပါ။
ပြောင်းဖူးနဲ့လုပ်တဲ့ကြာဇံတွေ့လို့ ဝယ်ထားတာ ကြော်စားဦးမှ… ပဲပြား၊ ခရုဆီ၊ ကြက်သား၊ ဥနီ၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်ဥ၊ နှမ်းဆီ၊ ဆယ်လာရီ.. ရှိထားပြီ.. ပန်းဂေါ်ဖီနဲ့ဂေါ်ဖီရလျင် ပြည့်စုံပီ…
ပြီးရင် ပို့(စ) တင်ပေးးး
ပို့(စ) ချင်း ပေါင်းလို့ ရအောင်။
.ဆန်ကြာဇံသုတ်တော့ အိမ်ကဆိုင်မှာရောင်းလို့ အရင်ကစားတယ်..ခုတော့ရိုးသွားလို့ မစားတော့ဘူး
မနေ့က ဓာတ်ပုံထည့်ချင်လို့ သုပ်စားမယ် ဆိုကာမှ ပဲ ကြာဇံက မရှိပဲ အိမ်မှာ ဆန်ကြာဇံပဲရှိတော့ ဆန်ကြာဇံလေးပဲ သုပ်စားလိုက်ရတယ်။
” ကြာဇံကြော် အသားများများ ကြက်ဥထဲ့ ထုံးစံတိုင်း”
လို့ ကျောင်းသားဘ၀ တရုတ်ကြီးဆိုင်မှာ နောက်ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်တွေတောင် ပြန်လွမ်းသလိုဘဲဗျာ။
ပဲကြာဆံကိုတော့ ယိုးဒယားဆီးဖုသုတ်…ကြာဇံချက်.. နောက် ရှစ်မိုင်..ပြည်လမ်းမပေါ်က ဟိုင်နန်လား..ယူနန်လား..အဲ့လိုနာမည်မျိုးနဲ့ဆိုင်က ပဲကြာဆံကို ကြက်သား..မြေအိုးနဲ့ပေါင်းထားတာ အရမ်းကြိုက်.. အရင်က မကြာမကြာစား.. ခုမစားဖြစ်တာ ၈နှစ်လောက်ရှိပြီ.. အရသာတောင် မမှတ်မိတော့..ဆိုင်ရှိသေးလားလည်းမသိတော့.. :mrgreenn:
အမှန်တော့ ကြေးအိုး ဆီချက်က မလုပ်တတ်လို့ ချန်ခဲ့တာ။
(Credit to http://taunzalat.blogspot.sg/2013/03/blog-post_4441.html)
၁။ ကြက်အပေါ်ဆီ – စားပွဲဇွန်း၂ ဇွန်း
၂။ ဆီချက်ဆီ(ကြက်သွန်ဖြူ) – စားပွဲဇွန်း (၃)ဇွန်း
၃။ ပဲကျဲ(Maggi Cooking) – စားပွဲဇွန်း(၃)ဇွန်း
၄။ ငရုတ်ကောင်း – အနည်းငယ်
၅။ ဆန်ကြာဆံ(ရေစိမ်) – ၈ ကျပ်သား
၆။ ခုဆိုင်ရွက် – ၅မူးသား
၇။ မုန်ညင်းစိမ်း – အစည်းတစ်ဝက်
၈။ ကြက်သားအကြမ်း – ၁၆ တုံး
၉။ ကြက်သားလုံးအချော – ၂လုံး
၁၀။ ငုံးဥ – ၂လုံး
၁၁။ ကြက်ဥ – ၁လုံး
၁၂။ ဆီချက်ဖတ် – စားပွဲဇွန်း(၁)ဇွန်း
၁၃။ ပဲပြား – ၁တုံး
၁၄။ ဆီမွှေး (ဟင်းရည်ထဲထည့်) – အနည်းငယ်
၁၅။ ကြက်ပြုတ်ရည် – ၁ခွက်
• ဟင်းချက်မှုန့် – စားပွဲဇွန်း (၂)ဇွန်း
• သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်း
• ပဲကျဲ – စားပွဲဇွန်း(၄)ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်း – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်း
.အောင်မယ်လေးးး မောပါ့ ကေဇီရေ
. ကျောက်စ်တစ်ယောက်လောက် ဘယ်လိုတွေ့အောင် ရှာမလဲ။ တွေ့ရင် ဘယ်လိုအမိဖမ်းမလဲ စဉ်းစားရတာက ပိုသက်သာဦးမယ်။
.အမဖြင့် ကျောက်စ်ကို အမိမဖမ်းနိုင်ခဲ့လို့ တနေ့တနေ့ ရောက်လိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ။
နာ့ အမွကတော့ လုပ်ပြီ။
ပဲကြာဇံသုပ်ရော စားဖူးလား… မြိတ်လက်ရာလေ… ပဲဟင်းပါ ထည့်ပြီး နယ်စားရတာ…
မေးပေးမယ်.. စားပဲ စားဖူးတာ.. လုပ်တာတော့ လုပ်ဖူးဘူး.. ပဲပင်ပေါက် သခွားသီး.. မကျည်းနှစ်ရေ.. အာလူး.. ပဲမှုန့်လဲ ပါလောက်တယ်.. အားလုံးပြီးရင် ပဲဟင်းထည့်စားရတာ… ဆီချက် အဖတ်တွေလဲ ဖောချင်းသောချင်းထည့်ရတာ.. စားခဲတယ်ဗျ… မေးပေးမယ်နော်…
ကြာဇံတွေ စုတယ်ဆိုတော့ ကျန်တာလေး ဖြည့်ပေးတာပါ… :D
ကြာဇံဖတ် ကို သိပ်မကြိုက်လှဘူး။
ဒီတော့ အထဲက ချက်ထားတဲ့ ကြက်သားလေးတွေချည်းပဲ ရွေးစားလို့ ရမလား ဟင်…. :D
ကြက်သားတို့ ပင်လယ်စာတို့ ဘာတို့ ညာတို့ ဟိဟိဟိ
လိမ္မာတယ် ငါ့မောင်လေးက ….
နောက်ခါ နန်းကြီးသုပ်ရင် ခေါ်ကျွေးမယ်။
နန်းကြီးမသုပ် တောင် ဟို Street Food market လေး မှာ ကျွေးရင် မဆိုးလှပါဘူးလေ… ဟိဟိး)
အစားအသောက် နဲ့ ပတ်သက်ရင် မျက်စိက လျှင်တယ်း)
ပြန်လာရင် သာ ဇီဇီ ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးပါတော့
ကိုခ က ပိုက်ပိုက်ထုတ်ပေးမယ်
မာဃ မိဗုံ နဲ့ ကျုပ်က အကဲဖြတ်ပေးမယ်
စားရဲ ရင် ချက်ကျွေးမှာပ!!
ဘာ မစား ရဲ စရာ ရှိလဲ အလွန် ဆုံး ပန်းကိုကို ထက်တော့ မပိုလောက်ပါဘူး
ရေးးးးးးးးးးးးးးးဝင်ရဘီကွ။ မပုတုကျေးဇူးနဲ့ လမ်းပိတ်နေလို့ ထမင်းဆိုင်ကိုလာလို့က်ုမြဖစ်နေဒါ။ ကြာကြာစံရအောင်တနေ့တမျိုးကြာဇံလုပ်စားအူးမှ။ :sar:
ချွေးမွလေး အဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ် ရေခဲတောင်ရောက်တွားလို့လားဟင် :byee:
အချစ်တော်တွေ အကုန် အလုပ်ရှုပ်နေတော့ ပျင်းတာပေါ့
ဒီနေ့.. ရိုးမမှာ.. ခေါက်ဆွဲသုတ်စားခဲ့တာ…
မြန်မာစာတွေထဲ..အဲဒီအချောင်းတွေ.. အသုတ်လုပ်တာမျိုးက… တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူ… ကွဲပြားသမို့.. ကမ္ဘာအနှံ့.. မက်ခ်ဒေါနာလို.. ဖရန်ချိုးင်းဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်တယ်.. ထင်မိ..။
ဘူ စ လုပ်ပြီးးး ကြီးးးပွားးး မလဲ စောင့် ကြည့်ဦးးမယ်။
မြန်မာ ပီပီ ပြီးးမှ သာအောင် လိုက်လုပ်မယ်
ကြာဇံဟင်းခါး ၊ ကြာဇံချက် ကြိုက်၏ ၊
ကြာဇံကြော်ကိုလည်း ခေါက်ဆွဲကြော်ထက် ပိုကြိုက်၏ ၊
ကြိုက်သော ကြာဇံအကြောင်း ပုံနှင့်တကွ ပြောပြ၍ စိတ်တို၏ ၊
( မြင်သာမြင်ရ၍ )
မမ ကို မှတ်ထားးးနော်
အခု ကြီးလာတော့ (အသက်) ခေါက်ဆွဲကို အသေအလဲ..ကြိုက်သွားပြီး…
ဒီမှာ မောင်ရင် အလင်းဆက်…
ခင်ဗျားက ကြာဇံကို အရင် ချစ်ခဲ့ပြီးမှ ခေါက်ဆွဲကို ပြောင်းဆွဲ အဲ ပြောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့
ခင်ဗျားက အပြောင်းအလဲ သိပ်များတယ်လေ… ကြာဇံမှာ အပြစ်မရှိသလို မောင်ရင်မှာလည်း ပြောင်းကြိုက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်…
အလကားစတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဖွေးဖွေးက ကိုယ်နဲ့ အတူ ကြာဇံပြုတ်သောက်နေကြတာလေ…
ဝေဝေ လိုဘဲ ပဲ နဲ့ ဆန် ဇဝေဇဝါ တွေးခဲ့ ဘူးပါ့။
ငယ်တုန်း က ကြာဇံ ဝယ် ရင် ဆန် က ဈေးသက်သာ တေ။
ပဲ က ဈေးကြီး တယ် လို့ မှတ်ထားဘူးတာ။
အခု ရော မြန်မာပြည်ထဲ ဘယ် ကြာဇံ က ပို ဈေးကြီးလဲ။ :))
နာ့ ဆီကို ဖွေးးဖွေးး ခေါ်မလာ နဲ့
ချက်ကြည့်တယ် ချက်ကြည့်တယ်… မမြင်ရဘူး.. ဗိုက်ထောက်နေလို့….
စတာပါ… အိမ်မှာတော့ ကြာဇံစားနည်းကိုတော့ အတော်လေး ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်…
အခုဟင်းချက်နည်းများအား ယောက္ခမကြီးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေးမပေးရပါက အချပ်လိုက် Printer မှ ထုတ်ပြီး ချက်ပြုတ်ကျွေးပါမည်အား သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါမည်။
အိမ်ရှိလူအားလုံး အန်တီဇီ ပို့စ်ကြောင့် ဗိုက်ခွေးနမ်းကိန်း ဆိုက်ဒ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း…
Credit to ဆက်ဆက်
မန်းလေးမှာလေ ကြာဇံကြော်ကို ဒုတ်ထိုးနဲ့တွဲရောင်းနေပြီ
တွတ်ပီဆိုင်ပဲ သွားတော့မယ် ဒီတပတ်ပိတ်ရက် :sar:
လွယ်လွယ် ဝယ်စားလို့ ရတဲ့သူက ရန်တွေ့နေတယ်။
အဟင့်။သများတို့က ပင်ပင်ပန်းပန်းချက်ပြီးမှ စားရတဲ့ ဘွပါ။
ပြောရင်း ဝက်သားဒုတ်ထိုးလေး စားချင်ထာ။
ဒါကတော့ ကိုကိုကျောက်ရဲ့ ယိုးဒယားစတိုင် ပုစွန်နဲ့ ကြာဇံပေါင်းပါတဲ့ ခင်ဗျားးး
ပုဇွန် ပုံစံမပျက်လေးသင်ထား… (အဟိ အဲဒါမိနှင်းကျွမ်းတယ်)
ပဲကြာဇံ ၂-ထုပ် (အချင်အတွယ် မမှန်းတတ်)ကို ရေစိမ်ပြီးပွလာရင် …
ပဲငံပြာရည် အကြည် ၃-ဇွန်း ၊ ပဲငံပြာရည် အနောက် အချိုဇွန်း ၁-ဇွန်း နဲ့ နယ်ထားပါ ။
ပုဇွန် ဆိတ်ကလေး ၂-ဇွန်းစာလောက်ကို ခရုဆီ အချိုဇွန်း -ဇွန်းလောက်နဲ့ နှပ်ထားပါ ။
ဂျင်းတစ်လက်မလောက် မထူမပါး ၂-ချပ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၂-ဥလောက်ကို ရယ်ဒီပြင် ၊ ဆီပူရင် သတ်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် ပုဇွန်ဆိတ်လေးတွေလည်းထည့် ၊
ပုဇွန်အကြီးလည်း ထည့်ပေါ့ ၊
ခဏနေရင် နှပ်ထားတဲ့ ပဲကြာဇံထည့် ၊
ပုဇွန်ထုပ်တွေကို အပေါ်တင် ၊
နှမ်းဆီ စားပွဲတင် ၂-ဇွန်းလောက် ပုဇွန်အပေါ်ကနေ ဆမ်းပေးပါ ။
ရေခမ်းသွားရင် အတော်အရောင်လှ အရသာကောင်းတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ရပါဘီ ။
သဘောကတော့ ပုဇွန်ဆိတ် အချို + ပုဇွန်ထုပ် အဆီ ပဲကြာဇံထဲ ဝင်စေတာဗျား…
(ခရက်ဒစ် တူ ဦးကျောက်ခဲ)
ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် ပွဲ ထဲ ရွာထဲ က နည်း တွေ နဲ့ Homemade ကြာဇံကြော် ၊ ပေါက်စီ တို့ အတော် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဟိုးတုန်းက redaymade တွေ ဝယ် သွားတော့ မဆန်းဘူးပေါ့။
Gazette Chef များ အားလုံး ရှဲရှဲနိ ပါ။ :))
ကိုရီယားကြာဇံကို နဲနဲပျော့အောင်ပြုတ်ပြီး ဆား ပဲငံပြာရည် သကြားနဲနဲ နဲ့နယ်ပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲထည့်တယ်။ ဆီနဲနဲလေးနဲ့ ကြက်သွန် ဂေါ်ဖီနဲ့ ပုဇွန်ကို အရသာရောပြီး အချိုရည်ထွက်အောင်ကြော်ပြီး ကြာဇ့ပေါ်တင်ပြီး ပေါင်းအိုးပေါတင်ပေါင်းလိုက်တာပဲ။
မဒမ်ဂျစ်ကို ပို့စ် ပြပီး ကြော်ခိုင်းလိုက်မယ်.. အဲ့ဒါမှ တားအတွက် အီးဇွီးကွက်ဖြစ်မှာ..
ကြာဇံကိုရှယ်ကြော်ပီး ငရုတ်ရည်နဲ့ သုတ်တာကို TTK ပါပဲ ဂျီးဒေါ် ခင်ဇော်..
လာအားပေးတာကို ကျေးကျေးပါ မုန့်ကြိုးလိမ်။